Fitaovana hamoronana sary tsara amin'ny tambajotra sosialy | Famoronana an-tserasera
Fitaovana hamoronana sary lehibe amin'ny tambajotra sosialy
ankehitriny, ny tambajotra sosialy dia toerana mety hampiasana azy, izay zaran'ireo mpampiasa isan'andro ny atiny tsy misy farany amin'ny karazany rehetra. Toy izany koa, ny olona dia afaka mifampiresaka amin'ny fomba maro amin'ny alàlan'ity atiny ity, ary koa amin'ny fanaovana resadresaka ifanaovana na resadresaka ifanaovana.
Ka, media sosialy koa avelao izahay hisafidy mpampiasa irinay ny hanatanterahana ireo karazana fifandraisana rehetra ireo sy hizara vaovao. Ankehitriny, mankafy mpampiasa an-tapitrisany manerantany ny tambajotra sosialy.
1 Fitaovana hamoronana sary amin'ny tambajotra sosialy
2 Noho izany, ny sasany amin'ireo fitaovana fanovana tranonkala dia mety:
2.4 Fanononana teny nalaina
Fitaovana hamoronana sary amin'ny tambajotra sosialy
Ao anatin'ity fifanakalozana rehetra ity dia ataon'ny olona ho zavatra iraisana ao anatin'ny segondra vitsy ny fampahalalana, amin'ny fomba izay hita ao amin'ny mila manamboatra fanovana amin'ny atiny sasany, mazava ho azy ny atin'ny karazana sary ary vao mainka aza izany raha ny vaovao zaraina dia fananany.
Ka io dia momba ny maha-zava-dehibe ny olona sasany mety hahita ao amin'ny vaovao izay manapa-kevitra ny hampakatra amin'ny tambajotra sosialy, ary koa ny fomba fanaovan'izy ireo an'ity atiny ity ho zavatra iraisana. Noho izany ity lahatsoratra ity dia hamoaka maromaro fitaovana ahafahan'ny mpampiasa manova ny sariny mba hahafahanao manao ireo vokatra ara-maso mahafinaritra kokoa ho an'ireo rehetra afaka mahita azy.
Noho izany, ny sasany amin'ireo fitaovana fanovana tranonkala dia mety:
Una Fitaovana de dia hamela antsika hanova ireo singa ampianay amin'ny tambajotra sosialinay, ary koa bilaogy sy sanganasa nomerika.
Tsy ilaina ny manao fametrahana, satria tranonkala fotsiny ity fitaovana ity, noho izany antony izany dia afaka miditra amin'ny fotoana tsy ampoizina ny mpampiasa, tsy misy fetra toy ny habaka amin'ny kapila mangarahara na fitakiana manokana. Toy izany koa, azo atao ny mahita ao amin'ity programa ity andian-dahatsoratra tolotra ho an'ny sary izay iasantsika miasa.
Ity fitaovana ity dia natao ho fanovana sy famelabelarana ireo tetikasa horonantsary ary ny ampahany tsara indrindra amin'ny rehetra dia ny tsy tokony hanananao manam-pahaizana manokana momba ny siansa audiovisual.
Amin'izany fomba izany, Picovico lasa iray amin'ireo fitaovana fanovana horonantsary fatratra indrindra ho an'ny mpampiasa rehetra. Miaraka amin'ny fampianarana maro dia mamela ity mpampiasa ity mamorona filaharana sary izay afaka miaraka amin'ny feo sasany ihany koa. Noho izany, ahafahanao manampy effets sasany amin'ireo sary izay haseho eo amin'ny efijery.
Este mpanonta sary mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny fanovana sary matihanina nefa tsy ilaina izany.
Ny fanavaozana an'ity programa ity dia ny fahafahan'ny mpampiasa hanatanteraka tetikasa sary sarotra tsy misy fahalalana faran'izay kely indrindra ilaina ho an'izany. BeFunky dia hamela anao hanao asa lehibe nefa tsy misy olana lehibe eo anelanelany.
Fanononana teny nalaina
Este fandaharana mamela ny mpampiasa mamorona fehezan-teny fanalana bas-tena tsara, amin'ny fomba izay voalaza ireo fehezanteny ireo dia miaraka amina fiaviany mahafinaritra tokoa ho an'ny tsiron'ny mpampiasa. Ny fitambaran'ny loko azon'ity programa ity atao dia hamela ny mpampiasa ho afa-po amin'ny tetikasany tsirairay.
Izy io dia programa izay hamela anao hamorona sary mahafinaritra ho an'iza. amin'ny mihoatra ny 40 ny zana-kazo samihafa, ary koa sarintany mihoatra ny 200 hanolorana ny fampahalalana arak'izay azo atao, ity programa ity dia iray amin'ireo vahaolana tsotra indrindra ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mila manolotra vaovao amin'ny fomba voafintina indrindra nefa tsy very saina.
Ity programa ity dia iray amin'ireo tsotra indrindra amin'ny tranonkala ary izany no nahatonga ny fampiasana azy: ny fahatsorany.
Este fandaharana mamela ny mpampiasa misafidy endritsoratra exotic ho an'ny asa sorany, amin'ny fomba ahafahany manoratra miaraka amin'ny loharano izay ahatsapany fa mahazo aina sy fantarina indrindra izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fitaovana hamoronana sary lehibe amin'ny tambajotra sosialy
Ny maha-zava-dehibe ny hierarchy maso amin'ny famolavolana
Ireo fanadihadiana fanadihadiana tsara indrindra momba ny famolavolana sary